Intengiso ye-Intanethi yokuthengisa kunye ne-Injini yokuKhangela i-Optimizaton
Uqinisekisa njani ukuba iidola zentengiso zizisa abathengi abatsha.
Zininzi iindlela ezithi zibhengeze amashishini amancinci ukuzisa abathengi abatsha kubandakanya, unomathotholo, iTV, iibhodi zezaziso, iimagazini kunye nentengiso yeintanethi. Ingxaki abajongana nayo abaphathi beevenkile yindlela yokuxela ngokuchanekileyo ukuba yeyiphi indlela yentengiso esebenzayo. Ngaphandle kokuba ubuze wonke umthengi omtsha oza emnyango uza kuyazi njani ukuba yeyiphi indlela ekuzisela yona, abathengi abatsha? Olu lwazi lubalulekile ekukhuleni kweshishini lakho kuba livumela abaphathi ukuba babele imali ngakumbi kwinto esebenzayo kwaye bonge imali kwizicwangciso zentengiso ezingasebenziyo. Kuzo zonke iindlela zokuthengisa ezaziwayo, uGoogle kuphela onika idatha engenakuphikiswa kwinani labathengi abafumana ishishini lakho ngokukhangela kwi-intanethi. UGoogle ubonelela ngenani lenyanga elithe ngqo kwinani labathengi abacofa umkhombandlela kwivenkile yakho ngenyanga. Esi sisalathiso esihle sokuba bangaphi abathengi abatsha uGoogle abonelela ngeshishini lakho kwaye ikunika imetric eqinileyo yokubala utyalo-mali lwakho lwentengiso xa kuthelekiswa nembuyiselo kwinzuzo.
Makhe sibonise umzekelo womnye wabathengi bethu ozixhobo zokuzonwabisa zentsangu eziseTacoma Washington. Kwimizobo engezantsi sinika umfanekiso-skrini xa umthengi ekhangela izibonelelo eTacoma Washington kwaye emva koko ukhethe iGreen Collar Cannabis. Kwikona ephezulu ngasekunene liqhosha elitsho umkhombandlela. Nje ukuba umthengi acofe elo qhosha ubasa kwimephu ebanika umkhombandlela ukusuka kwindawo yabo yangoku ngqo ukuya kwishishini lakho. Yintoni uninzi lwabanini bamashishini abangayiqondiyo kukuba uGoogle ugcina umkhondo NGONAPHAKADE ixesha apho umthengi ecofa elo qhosha. Ayigcini nje ngokulandela inani labantu abacofa eli qhosha kodwa bayagcina umkhondo KUPHI bafumaneka. Le datha ibaluleke kakhulu engenakho ukubonelelwa ngayo nayiphi na enye indlela yentengiso.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqonde kukuba kuphela ngumthengi OMTSHA oza kucofa kwiqhosha lesalathiso kuba abathengi bangoku bayayazi indlela yokufumana ishishini lakho kwiimeko ezininzi. Umyinge wenzuzo ngentengiso nganye kwii-8 zeedola kumthengi ngamnye. Kwaye ndiyanikhumbuza ukuba oku kuphela ukuba umthengi uthenga into enye kwaye angaze abuye kwaye siyazi ukusuka kwiimethrikhi zangoku ukuba iindawo zokulima intsangu zinenqanaba lokugcina malunga neepesenti ezingama-60 kwixabiso liphezulu kakhulu. Bona inqaku lethu: Yimalini umthengi ohlawula imali.
Ngokudibanisa inani labathengi elivelisiweyo kolu hlengahlengiso siza ne-1129 yabathengi abatsha abaziswe ngoKhangelo lukaGoogle kolu shishino. Kwaye gcina engqondweni oku kuGoogle kuphela, ayibandakanyi iBing kunye nezinye iinjini zokukhangela. Xa siphinda-phinda i-1129 x * 8.00 sifumana iidola eziyi-9,032 zeedola kwinzuzo ngenyanga. Ngoku eli nani liphezulu kakhulu kuba ayinguye wonke umntu okhangela ishishini lakho oya kucofa iqhosha lesikhombisi. Abanye baya kufaka idilesi ngqo kwiinkqubo zabo zokuhamba okanye bafumane umkhombandlela kwiwebhusayithi yomntu wesithathu. Inqaku leli nqaku kukubonisa ukuba ukutyala imali kwiNjini yokuKhangela yenye yeendlela ekunokukhethwa kuzo zokuqinisekisa ukuhamba kwabathengi abatsha. I-Google ayiboneleli ngamanani kuphela kodwa ikwabonelela ngeendawo apho abathengi bakho bavela khona. Ukuba ubona indawo yesixeko sakho ofuna ukujolisa kuyo unokuqina kwi-SEO yakho ngokuqinileyo ukongeza amagama aphambili ukuzisa ingeniso ethe kratya. Iipesenti ezingama-93 zazo zonke izinto zalapha ezenziwa kuGoogle kwaye ukuba ishishini lakho alibonisi kwiphepha lokuqala bonke abo bathengi baya kwabo bakhuphisana nabo.
At Isenselogic.com Iinkqubo zethu ze-SEO ziqala kancinci njenge- $ 500 yeedola ngenyanga kwaye siqinisekisa umsebenzi wethu. Ukuba asilonyusi inani labathengi abangena kwiminyango yakho eqinisekiswe nguwe ngeGoogle Console, siya kusebenza simahla de kube ubuncinci siphindwe kabini ukubala kwabaxumi bakho abangenayo. Nxibelelana nathi namhlanje ukwenza uphicotho lwe-SEO simahla kwaye siya kukubonelela ngengxelo yasimahla yomntu okhuphisana naye kunye nohlalutyo lwamagama aphambili kwishishini lakho. Ixabiso leedola ezingama-800.
Iziphumo zaBathengi bethu kuGoogle
Ixabisa malini iLeafly kunye neWedmaps?
Iinyani ze-SEO zeDipensary